Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadaha Ogaadeenya ee Yurub oo ku sii qulqulaya xarunta QM ee Geneva
Jaaliyadaha Ogaadeenya ee Yurub oo ku sii qulqulaya xarunta QM ee Geneva
Posted by ONA Admin	/ March 9, 2014
Jaaliyadaha Yurub ayaa si xoowli ah ugu sii qulqulaya magaalada Geneva ee Switzerland. Jaaliyadaha oo ka kala yimid wadamada UK, Norway, Sweden, Denmark, Holland, Germany, Belguim iyo Switzerland ayaa halkaa ka dhigi doona mudhaaharaad weeyn oo looga soo horjeedo gumaadka gumeeysiga Itoobiya iyo u adeegayaashiisa ka wadaan Ogaadeenya.
Xarunta UNta ayaa waxaa beri 10ka Maaro ka furmaya shirkii Human Rights Council. Banaanbaxan ayaa dowladaha dhamaan UNta ka tirsan indhahooda ku soo jeedinaya dhibaatada gumeeysiga itoobiya ku hayo shacabkaS Ogaadeenya.
Jaaliyada Yurub ayaa wacad ku maray in itoobiya beenta dibadaha kaga tuugsato idraha u xiri doonaan meel walbana kaga horeeyaan. Halganka umada Ogaadeenya ayaa guulo waaweeyn dibada iyo gudaha ka soo hoyiyay iyadoo dhamaan goobaha caalamka itoobiya biloowday in aanay ka muuqan. Tani ayeey ugu wacan tahay ka dib markii Diasporada Ogaadeenya si adag ugu lug yeesheen dhamaan xarumaha Yurub ee itoobiya si nabad ah uga tuugsan jirtay. Heeyadaha UNta iyo kuwa aan doowlagi aheen ayaa har iyo habeen muujiya dhibaatada itoobiya ku heeyso shacabka dulman eeS Ogaadeenyaiyadoo la filayo in talaabooyin hor leh heeyadahani qaadaan.
La soco beri yio wacdaraha goobta ka dhaca.